WordPress yeDiki Bhizinesi | Martech Zone
WordPress yeBhizinesi Diki
Mugovera, Gunyana 8, 2012 Muvhuro, Kukadzi 1, 2016 Douglas Karr
Nepo paine tani yevanhu muindastiri iyo inosundira WordPress, zvinogona kutyisa kune bhizinesi diki risina tech savvy kutora kuvaka kwavo WordPress semuenzaniso. Iyi yakanaka infographic inofamba munhu kana timu kuburikidza nezvavanoda kuti vanzwisise uye setup pavanenge vachironga nekushandisa yavo WordPress saiti. Ini ndinodawo iyi infographic nekuti inoda mushandisi kubaya-kusvika kune iyo yekudyidzana microsite kuona mhinduro.
Mune mawonero angu, pane kurudziro imwe chete yakashaikwa kubva pane zvakakurudzirwa - uye ndiko kuenda ne PrimePress WordPress yekutambira seFlywheel. Nekuenda neakagamuchirwa mukuru, bhizinesi diki rinogona kugogodza ingangoita hafu yenyaya idzi kubva pane yavo yekutarisa, kusanganisira mabhakiti, chengetedzo, kuchengetedza, kuita, uye rutsigiro!
Tags: sei ku WordPresskumisikidza wordpressWordPress sei
Gadzira Yekupedzisira Mutengi Chiitiko
Sep 9, 2012 na7:12 PM
OMG! Ida chirevo che "Mukufunga Kwangu" kupfuura zvese! Ndiani ane pfungwa dzakanaka angatofunga izvi kana isu tava nemhinduro huru uye isingadhure yeSaaS? Pano paTyner Pond Farm (bhizinesi diki rakajeka.) Tinoshandisa zvese Compendium neHubspot. Zviri nyore, zvinoyerwa uye hazvidhure. Hapana papi pane iyi infographic pandinoona chero chinhu nezve analytics kana kuyera ROI.
Sep 9, 2012 na9:38 PM
Vanhu vanonyatso tarisira pasi zviwanikwa izvo zvinoda kuvaka kunze kwehunyanzvi kuita kweWordPress. Ivo vanofunga kuti "yemahara" uye vobva vawana zvishoma nezvishoma nyaya dzese nekugadzirisa, plugins, dhizaini, backups uye chengetedzo. Isu tinoda WordPress asi isu tine yenguva yakazara WordPress mugadziri uye mugadziri pavashandi… haasi mabhizinesi akawandisa ane zviwanikwa izvozvo!
Dec 13, 2012 pa 2: 33 AM
Thanks kundidzidzisa mafambisirwo ebhizinesi diki. WordPress ndeyechokwadi yakavimbika uye ine inonzwisisa infographic. Icho chinhu chinozobatsira bhizinesi rakawanda, nekuti chinogona kushanda sechimwe chinhu kune vanhu vako.